Fandaharam-panofanana Countertrade sy Offset - World Trade Exchange
mividy fananana na orinasa
TSY MISY VOLA VOLA
NY TOERANAO ankehitriny?
Ny fomba tsara indrindra hividianana fananana na orinasa TSY MISY VOLA.
Ny fomba tsara indrindra hividianana fananana, fotodrafitrasa famokarana (milina, fitaovana, teknolojia, ozinina famokarana iray manontolo, toeram-pitrandrahana, ozinina fanodinam-bidy, sns.) Na fanavaozana ireo fotodrafitrasa efa misy tsy misy vola dia ny famporisihana ireo mpamatsy hamatsy vola ny fividiananao. na fahazoana amin'ny alàlan'ny fifanarahana BUYBACK. BUYBACK dia endrika iray mifanohitra amin'ny famatsiam-bola amin'ny fividianana na fahazoana fananana, orinasa ary toeram-pamokarana mampiasa ny vola, ny trosa ary ny loharanon'ny mpamatsy / ny mpivarotra.
INONA INDRINDRA NY CONTACT BUYBACK?
mahazo trano famokarana nefa tsy manam-bola.
Ny fifanarahana fividianana entana dia fifanarahana mifanohitra amin'izany izay ifanarahan'ny mpivarotra / mpamatsy trano famokarana turnkey (milina, fitaovana, ozinina famokarana iray manontolo, toeram-pitrandrahana, ozinina manan-danja, sns.). vokatra vokarina novokarina avy amin'ny fiasan'ilay toerana voalaza, fananana na orinasa.
Eo ambanin'ny fifanarahana fividianana entana dia manome ny toeram-pamokarana ho anao nefa tsy mahazo karama mialoha ary manaiky ny hividy entana novokarina tamin'izany toerana toy ny fandoavana.
Izany no ahafahanao mahazo toeram-pamokarana ilaina maika tsy misy vola midina ary tsy mandeha any amin'ireo mpampiasa vola, banky, na andrim-bola.
Ohatra, afaka mahazo orinasa mpanamboatra $ 500M amin'ny mpivarotra ianao (tsy misy vola alatsaka) mifototra amin'ny fifanarahana mividy entana. Manaiky ny mpividy fa hividy ampahany kely amin'ny vokatra vokarin'ny orinasa mpanamboatra anao manomboka amin'ny taona fahenina aorian'ny fametrahana ny zavamaniry. Ny fanavotana ny vokatra avy amin'ny zavamaniry anao manomboka amin'ny taona faha-6 dia hamatsy vola ny fandoavana ny orinasa mpamokatra $ 500M anao.
Ohatra, afaka mahazo milina solitany $ 50B ianao nefa tsy mandoa vola mialoha amin'ny alàlan'ny fifanarahana fividianana entana. Ny fividianana solila 50 6 $ dia hamatsiana ara-bola ny famarotana indray ny solika voadio, izay vokatra mivantana avy amin'ny asan'ny mpitrandraka nanomboka ny XNUMXth taona.
OHATRAN'NY TRANSACTIONS BUYBACK
LEVI STRAUSS AND THE GOVERNEMENT OF HUNGARY NAHATONGA NY FIVORIANA TRANONDRO.
Rehefa nanapa-kevitra ny hanitatra ny asany eropeana i Levi Strauss, mpanamboatra jeans jeans lehibe indrindra eran-tany, dia nanomboka nifampiresaka tamin'ny Governemanta Hongria izy. Te hanangana orinasa jeans jeans i Hongria saingy tsy nanana vola mafy handoavana izany. Vahaolana: nividy fitaovana sy fahaizana avy any Levi Strauss i Hongria, ary nanaiky i Levi Strauss fa hamerina ny ampaham-pamokarana. Ny orinasa izao dia mandray 60 isan-jaton'ny vokatra isan-taona amin'ilay orinasa, tsiroaroa manodidina ny iray tapitrisa isan-taona, amidiny any Eropa sy Afrika.
Ny fifanarahana famerenana amin'ny laoniny an'i Levi sy ny fiovaovana teo aminy, izay antsoina matetika hoe countertrades, dia tsy hetsika mitoka-monina intsony. Raha ny marina, fifanarahana maro be no vita tao anatin'ny telo taona lasa izay nanambaran'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta, ny banky ary ny mpandinika indostria fa ny varotra toy izany dia hitentina 30 isan-jato na mihoatra amin'ny varotra iraisam-pirenena rehetra.
ZAVA-POTANA ALUMINIMA $ 750M natsangana TSY MISY VOLA VOLA.
WTE Nanampy ny mpanjifa iray nanangana orinasa $ 750M Aluminium tsy misy famatsiam-bola avy amin'ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny fandaminana mividy. Amin'ity fandaminana fividianana entana ity dia nanamboatra ilay zavamaniry ny mpamatsy ary nanolotra alumina (oksida iray an'ny aluminium hita ao amin'ny bauxite sy tanimanga) ho an'ny mpanjifanay ihany koa. Ho takalony, nanaiky ny hividy 20% ny aluminium vita vita tao amin'ilay zavamaniry nandritra ny folo taona manaraka ny mpamatsy ny aluminium sy ny alumina ho tambin'ny fananganana ilay zavamaniry.
ZAVA-PANDROSO VOLA VOLA VOLA 500M $ NATAINA TSY MISY VOLA VOLA!
WTE nanampy ny mpanjifa iray hahazo zavamaniry Copper Ore Processing mitentina 500 tapitrisa dolara tsy misy vola mitentina. Ho takalony dia nanaiky ny mpividy fa hividy ny 25% amin'ny famokarana zavamaniry mandritra ny dimy ambin'ny folo taona manaraka ho toy ny fandoavana.
TAPAKA famokarana enjeniary $ 2.5B $ natsangana tsy misy vola midina.
Sary tsara momba ny fifanarahana fividianana entana dia ny fifanarahana teo amin'ny Volkswagen Corporation sy ny orinasa alemanina farany teo. Ity fifanarahana ity dia nanery ny VW hanome tsipika famokarana feno afaka mamokatra motera 286,000 isan-taona amin'ny orinasa Alemanina raha tsy mandoa vola ny orinasa alemana. Ny vidin'ny tsipika famokarana sy ny fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana dia omena amin'ny alàlan'ny fandefasana amin'ny VW 100.000 motera isan-taona.
Fambolena METHANOL $ 235 tapitrisa voahangy tsy misy vola midina.
WTE nanampy ny mpanjifa hividy zavamaniry methanol mitentina 235 tapitrisa dolara nefa tsy manam-bola. Ho takalony, ny mpamatsy ny zavamaniry Methanol dia nanaiky ny hividy 25% ny vokatry ny zavamaniry mandritra ny dimy ambin'ny folo taona manaraka ho toy ny fandoavana. Ny mpanjifa dia nahazo ny drafitra methanol $ 235M tsy misy kapital ary tsy mandeha any amin'ireo mpampiasa vola, banky, na andrim-bola.
fifanarahana fividianana $ 20b OCCIDENTAL PETROLEUM AMMONIA.
Ohatra iray amin'ny fifampiraharahana amin'ny fividianana entana dia ny fifanakalozana amina ammonia Occidental Petroleum 20-tapitrisa dolara amerikana amin'ny orinasa rosiana. Nanampy ny Rosiana tamin'ny famatsiam-bola sy ny fananganana zavamaniry amoniaka i Occidental ary nanaiky ny hividy amoniaka novokarin'ireto zavamaniry ireto tao anatin'ny roa-polo taona. Antoko maro no nandray anjara tamin'ity varotra fividianana entana ity, ary tafiditra tao anatin'izany ny fampiasam-bola (amin'ny endrika fitoviana, fitaovana amin'ny renivohitra, indram-bola, fitantanana, fanohanana fotodrafitrasa ary famindrana teknolojia). Namatsy vola ny fahazoana sy ny fanamboarana ny mpamatsy. Voarohirohy ny mpivarotra sy mpivarotra. Ny banky dia niasa ho mpitam-bolan'ny vola mandra-pahatongan'ny fandoavana farany ny mpamatsy. WTE dia tsy tafiditra tamin'ity fifanakalozana ity.
VOLA $ 800 MILIONA MAMONJY VOLA TSY MISY VOLA.
WTE nanampy ny mpanjifa iray hahazo zavamaniry mpanao simenitra mitentina 800 tapitrisa dolara tsy misy vola mitentina. Ho takalony, ny mpamatsy ny orinasa mpanamboatra simenitra dia nanaiky ny hividy ny 10% amin'ny famokarana zavamaniry mandritra ny 20 taona manaraka ho fandoavana.
VOLA $ 500M VAROTRA VOAFIDY VONONINA TSY MISY VOLA VOLA.
Tao anatin'ny fandaharam-pividianana iray toy izany, ny orinasan'ny injeniera frantsay Technip dia nanaiky ny hanome zavamaniry roa izay hamokatra benzena 125,000 taonina, orthoxylene 165,000 taonina, ary paraxylene 165,000 taonina isan-taona. Ho fanonerana ny fitaovana sy ny fahazoan-dàlana, ny orinasa mandray dia nanaiky ny hanatitra isan-taona mandritra ny folo taona orthoxylene 20,000 taonina sy paraxylene 20.000 taonina miampy habetsaky ny vokatra petrochemical mifandraika amin'izany. Ny sandan'ny fifampiraharahana dia 500 tapitrisa dolara.
Nahazo zavamaniry $ 25 tapitrisa MOMBA TOMATO PASTE PROCESSING TANANA TSY MISY VOLA ATAO
WTE Nanampy ny mpanjifa iray hahazo $ 25 tapitrisa zavamaniry fanodinana voatabia Tomato nefa tsy misy famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny fananganana, famolavolana ary fanamorana ny famerenam-bola eo amin'ny mpanjifanay sy ny mpivarotra ny milina fanodinana voatabia. Nanaiky homena karama amin'ny alàlan'ny fanondranana paty voatabia am-bifotsy novokarin'ny milina ilay mpivarotra orinasa mpamokatra paoma voatabia. Ny mpividy ny milina fanodinana dia nanome toky fa ny paty voatabia am-bifotsy be dia be no aondrana any amin'ny mpivarotra ho fandoavana ny masinina.
fifanarahana $ 3.5b triangular ENERGY BUYBACK misy eo anelanelan'ny ZIMBABWE, CONGO, ary CHINA.
Ny orinasan'i Zimbaboe's Hwange Colliery dia nanome ny mpampiasa vola sinoa hanome vola vahiny ilaina be dia be hananganana mpamokatra herinaratra ho setrin'ny kaonferansa arina. Hwange dia hamatsy saribao sy coke taonina tsy fantatra ihany koa ho valin'ny fitaovam-pitrandrahana.
Ny talen'ny varotra sy ny mpampiasa vola John Nkala dia nilaza fa ny fitrandrahana arintany sy ny NORINCO dia nanaiky hanome solika NORINCO any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (DRC) miaraka amin'ny arina sy koka. Nilaza izy fa nanaiky ny hanome ny Hwange fitaovana fampitaovana tany Komatsu sy Caterpillar i NORINCO.
Ny Zimbaboeana mpampita herinaratra ZESA dia nanao sonia fifanarahana fampiasam-bola mitentina $ 3.5B amin'ny CATIC any Shina. CATIC dia niasa hanitatra ireo tobin-herinaratra Hwange 7 & 8 sy Kariba 7 & 8 ho valin'ny famindram-pitrandrahana arintany.
VOLA $ 250M VAROTRA VOAFIDY VONONINA TSY MISY VOLA VOLA.
Ohatra iray amin'ny fifanarahana fividianana entana dia ny orinasa britanika roa, ICI sy Davy Powergas, nivarotra zavamaniry methanol tamin'ny mpividy $ 250 tapitrisa ary nanaiky fa homena azy ireo amin'ny fividianana 20% ny vokarin'ny zavamaniry tao anatin'ny folo taona manaraka.
FAMPANDROSOANA NY TAMIN'ANDRIAMANITRA 10 taona TSY MISY VOLA VOLA!
WTE Nanampy mpanamboatra vatan-kazo fitobiana hahazo famatsiana vokatra vy azo antoka mandritra ny 10 taona nefa tsy mandany vola amin'ny alàlan'ny fandaminana mividy. Amin'ity fifanakalozana fividianana entana ity dia nanaiky ny mpamokatra vy fa hanome vy ny mpanjifanay (mpanamboatra talantalana), izay ampiasaina hanamboarana talantalana nefa tsy misy vola aloa mialoha. Ho takalony, nanaiky ny hamidy indray ireo talantalana amin'ny vidiny mihena ny mpamokatra vy, mandoa ny mpanamboatra talantalana amin'ny vy manta. Amin'ny fomba hafa, ny mpanamboatra tarika sy rafitra fitehirizana dia nandoa ny mpamatsy vy ireo talantalana vita amin'ny vy.
NY DEPARTEMAN'NY VAROTRA ASA.
CORPORATIONS ENGAGES IN
orinasa manao countertrade
Ireo orinasa mandray anjara mivantana amin'ny countertrade sy offset dia ny sasany amin'ireo anarana lehibe indrindra - General Motors, General Electric, The Boeing Company, Lockheed-Georgia, Martin Marietta Aerospace, Texas Instruments, Sperry Corp., Singer Co., Alcoa, Polaroid, SC Johnson & Sons, and Nabisco, DuPont, Dow Chemical, Cyanamid, Smith-Kline, ary ny fizarana simika an'ny Amaco sy ny Ethyl Corp. Lockheed-Georgia, Martin Marietta Aerospace, Texas Instruments, Sperry Corp., Singer Co, Alcoa, Polaroid, SC Johnson & Sons, ary Nabisco. Orinasa Fortune 500, orinasa voatanisa ao amin'ny New York Stock Exchange, sns.
ny departemantan'ny varotra amerikana: orinasa manao doka.
Raha ny filazan'ny departemantan'ny varotra amerikana dia: "Ny ankamaroan'ny orinasa mpiaro dia mampiasa offset sy countertrade mba hahazoana antoka ny ankamaroan'ny fifampiraharahana vahiny satria ny ankamaroan'ny firenena no mibaiko azy. Anisan'ireny ny Litton, Grumman International, Garrett, BMY, TRW, Perkin-Elmer, Emerson Electric, General Dynamics, Northrop, Allied Signal, Motorola, ITT, Raytheon, ary LTV Aerospace and Defense Co.
Orinasa tsy miaro tena izay manao fifanarahana mifanohitra, fividianana ary offset dia misy ny Xerox, IBM, Occidental Petroleum, ContiGroup Companies, Inc (CGC), Caterpillar, Monsanto, The Kraft Heinz Company, Goodyear, Rockwell Automation, Inc., General Electric, FMC, Tenneco, 3M, Coca-Cola, United Technologies, Pepsi-Cola, ary ny hafa. ”
MAMPIASA CORPORATIONS Lehibe ny countertrade handresena ny fifanarahan'ny governemanta!
WTE dia nanampy orinasa maro fanta-daza hampiasa countertrade sy offset mba handresena ny fifanarahan'ny governemanta. Ny iray dia orinasa mpiaro. Ny iray hafa dia orinasa mpanao trano. Ny iray dia fiaramanidina. Ny iray hafa dia orinasa fiara. Ny iray hafa dia orinasan-tsolika. Ny iray hafa dia orinasa mpamokatra vy. Ny iray hafa dia orinasam-pitaterana entana sy manerantany. Ny iray hafa dia orinasa mpitrandraka. Ny iray dia orinasa elektronika sy orinasa hafa an'arivony manerantany. Azontsika atao ny mahafantatra ny haavon'ny tombony azo avy amin'ny haben'ny biby goavambe izay nanampian'ny countertrade sy ny offset hatrany amin'ny farany ambany, ary eo amina miliara dolara izany.
TANTARA NY FAHOMBIAZANA TANINDRAZANA
INFUSION CASH $ 6.5B
Ny mpanjifanay, iray amin'ireo orinasam-panompoana solika lehibe indrindra manerantany miaraka amina asa any amin'ny firenena 80 mahery dia nahazo $ 6.5 miliara ho an'ny fitomboana sy ny fanitarana nefa tsy misy trosa na mamela ny fananana ara-bola ao amin'ny orinasan-dry zareo amin'ny alàlan'ny fampiasana fifanakalozana fifanakalozam-bola + tolotra + tolotra.
2.4 $ famerenam-bola tsy misy vola.
Mpanjifa iray hafa, orinasa angovo iraisam-pirenena miaraka amina asa any amin'ny firenena maherin'ny 150, no nanilika ny olana ara-bola nananany ary nandoa trosa $ 2.4B nefa tsy nampiasa vola, fa nampiasa ny vokatr'izy ireo tamin'ny endrika fitaovana ara-bola azo vidiana, izay navadika ho fananana ranon-javatra ao anatin'ny 24 ora amin'ny alàlan'ny fandaminana mifanohitra amin'izany.
VAROTRA ASA $ 1.8B ao anatin'ny 24 ora.
Ny mpanjifanay, orinasam-pitrandrahana solika amerikanina sy gazy voajanahary dia namidy fananana mitentina 1.8 miliara dolara tao anatin'ny 24 ora.
Fandraisana an-tsoratra ny menaka amin'ny vidin'ny ZERO.
Vao tsy ela akory izay ny mpanjifanay dia nahazo fitrandrahana solika maodely ho an'ny solika mentaly miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 20,000 XNUMX BPD amin'ny vidiny aotra amin'ny alàlan'ny fifandimbiasana + fividianana entana + tolotra + tolotra fifanakalozana switch.
$ 75MXNUMX FAMPANDROSOANA NY TANANA FAHASALAMANA AMIN'NY VOLA ZERO.
Ny mpanjifanay, orinasam-pamokarana vy, dia nanatsara ny fahaizan'izy ireo tamina famatsiam-bola mitentina 75 tapitrisa dolara hampitomboana ny fahafaha-mamokatra nefa tsy mampihena ny tahirimbola.
Ny mpanjifanay, mpanamboatra vokatra indostrialy izay manamboatra singa marobe - manomboka amin'ny vokatra an-tariby ka hatrany amin'ny haitao angovo sy ny serivisy dia nampiasa loharanom-bola mividiana vola zero hampihenana ny fandaniam-bola hatramin'ny 60%, mitahiry vola ary mampitombo ny tombom-barotra hatrany.
CARL ICAHN NAMARITRA $ 190M ho $ 610M Mampiasa COUNTERTRADE.
Carl Icahn, ny filohan'ny Trans World Airlines teo aloha, dia nitrosa 190 tapitrisa dolara tamin'ny TWA. Rehefa tonga ny fotoana fandoavana ny trosa dia 100 tapitrisa dolara monja ny banky ka tsy afaka nandoa. Icahn, miliardera mieritreritra haingana, dia nifampiraharaha tamim-pahatokisana ny fifampiraharahana mifanohitra amin'izany, miaraka amin'ny fividianana tapakila fanampiny amin'ny fihenam-bidy. Ny tapakila manontolo dia 610 tapitrisa dolara amin'ny tapakilan'ny fiaramanidina sarobidy. Avy eo dia nanokatra orinasa vaovao avy hatrany izy, Global Discount Travel Services, ary nanomboka nivarotra ny tapakila tamin'ny fihenam-bidy kely mihoatra ny 190 $.
TWA dia mpandresy tamin'ity fifanakalozana ity koa. Nofoanan'izy ireo ny trosany trosa 190 tapitrisa dolara tamin'ny fanomezana tapakila tamin'ny fihenam-bidy lehibe, ankoatry ny fanomezana ny seza. (Matetika, feno 65% ny fiaramanidina iray, noho izany ny sasany amin'ireo seza banga 35% - izay tsy azo amidy mihitsy raha vao mivoaka ny fiaramanidina - dia hampiasaina handoavana ny trosany, ary $ 190 tapitrisa mijanona ao amin'ny orinasa.)
Orinasa solika iray nahazo trano vaovao mitentina 3.5 miliara dolara ao anatin'ny 30 andro ary tsy manam-bola.
Orinasa mpampitan-tsambo fiaramanidina manokana no nahazo fiaramanidina manokana 23 $ 575 tapitrisa $ tsy misy vola mitentina.
Mpanamboatra vokatra indostrialy iray no nahazo milina, fitaovana ary famokarana turnkey vaovao mitentina 578 tapitrisa dolara tsy misy vola.
Orinasa mpamokatra orinasa iray no nahazo orinasa methanol mitentina 235 tapitrisa dolara nefa tsy manam-bola.
Vao tsy ela akory izay ny orinasan-tsolika dia nahazo fitrandrahana solika maodely ho an'ny solika solika miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 20,000 XNUMX BPD nefa tsy manam-bola.
Giovanni dia nahazo orinasam-pividianana vola mitentina 123 tapitrisa $ 250 miaraka amin'ireo mpiasa 768 tsy manam-bola.
Orinasa mpamokatra vy dia nohavaozina ny fahafaha-miasa amin'ny orinasa mitentina 75 tapitrisa dolara hampitomboana ny fahafaha-mamokatra tsy misy vola ambany.
8. Ny mpanjifa iray dia nahazo tany amina miliara dôlara tamina trano sy trano lafo vidy - tsy misy na inona na inona!
9. Mpanjifa iray hafa nahazo $ 850M $ biraon'ny birao, fiaran'ny orinasa, tsy manam-bola.
10. Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia nahazo tombony tombony $ 750,000,000-ampahefatra fanampiny tamin'ny fifanarahana mifanohitra aminy.
afaka mahazo valiny mitovy amin'izany amin'ny alàlan'ny programa CTO etsy ambany ianao.
countertrade sy offset
Vokatry ny programa (CTO).
SOA NY PROGRAMA CTO.
Rehefa vita ny programa CTO dia azonao atao ny:
Mahazoa / Manangana / manangana fotodrafitrasa famokarana (milina, fitaovana, teknolojia, orinasa mpamokatra entana iray manontolo, fitrandrahana, ozinina fanodinam-bokotra, sns.) Tsy manam-bola.
Mahazoa na mividiana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B tompon'andraikitra amin'ny orinasa tsy misy vola.
Amboary ny indostrian'ny indostria tsy misy vola ambany.
Mahazoa fifanarahana governemanta an-tapitrisany dolara amin'ny fampiasana countertrade sy offset.
Mahazoa teknolojia be pitsiny, fahaizana ara-teknika, fitantanana ary fahaiza-manao amin'ny marketing tsy misy vola.
Makà orinasa Fortune 500 hanao fifanarahana fividianana vola mifanohitra aminao.
Famatsiam-bola ny fifanarahana indostrialy, ny tetikasa, na ny fanafarana / fividianana tsy misy vola.
Mahazoa fananana, Fividianana trano, fananana, vokatra ary serivisy tsy misy vola.
Ampiasao amin'ny orinasa sy tetikasa vaovao fa tsy mila vola.
Raiso ny orinasa fanombohana manomboka amin'ny aotra ka hatramin'ny an-tapitrisany mampiasa countertrade irery.
11. Ampitomboy amin'ny 100X ny tombom-barotra ataon'ny orinasa— tsy ampitomboina ny vidinao, ny enti-manana ary ny risikao!
12. Mandrosoa orinasa mpanohitra tena mahomby ary manangana fifanarahana mifanohitra amin'ny Internet manerantany.
13. Misarika mpanjifa tondraka hampiasa vola amin'ny fifanarahana mifanohitra aminao ao anatin'ny 6 ora
14. Ataovy milahatra ny mpamatsy vola ary mangataka aminao araka ny tokony ho izy mba handray ny volany amin'ny fifanarahana mifanohitra aminao ao anatin'ny 24 ora
15. Ataovy azo antoka ny famatsiam-bola tsy misy zanabola (manomboka amin'ny 1,000,000 $ ka hatramin'ny $ 100 miliara)!
16. Ataovy tsy misy ifandraisany ny fifaninanana ataonao, manjaka ny tsena, ovao ny orinasanao, mamorona fitomboan'ny vola azo tombanana ary manambola amin'ny indostria tapitrisa dolara manaraka
17. Mamindra vola sy fananana erak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fiainana manokana sy tsiambaratelo.
18. Manamora ny varotra iraisam-pirenena sy ny fandoavam-bola eo amin'ny orinasa samy hafa.
19. Manamora ny fifanakalozana trosa arahin'orinasa sy firenena samy hafa.
20. Ampitomboy 10,000 30% ny vola miditra sy ahitanao ny orinasa ao anatin'ny XNUMX andro!
21. Amidio ao anatin'ny 24 ora ny vokatrao, serivisy, orinasa ary fanananao rehetra.
22. Ario ny 12 volana novinavinaina ho tahiry, fahaiza-manao tafahoatra, vokatra miadana na mihoatra ny vokatra ao anatin'ny 24 ora.
23. Mihodina orinasa mitolona ao anatin'ny fito andro!
24. Manaova doka amin'ny haino aman-jery isan-karazany nefa tsy mandany vola.
25. Aloavy ny trosan'ny trosa aminao nefa tsy andanianao vola.
26. Makà fihenam-bidy hatramin'ny 90% amin'ny vokatra na serivisy rehetra azonao vidiana!
27. Ahena 90% ny fandaniana nefa aza mampihena ny entana fandaniana.
28. Avereno ny trosa rehetra ao amin'ny fikambanana mandritra ny 30 andro!
29. Avadiho ho vola ny carte de commerce. Hanova vola ho varotra varotra.
30. Avereno ny fananana tsy mandeha amin'ny sanda boky feno ao anatin'ny 30 andro!
31. Avereno ny vola voasakana ao anatin'ny 24 ora amin'ny vidiny aotra!
32. Avadiho ho vola feno ao anatin'ny 24 ora ny vola aloa!
Kontinanta CTO PROGRAM
mividy TSY MISY VOLA.
Ahoana ny fividianana a toeram-pamokarana (milina, fitaovana, teknolojia, orinasa mpamokatra entana manontolo, toeram-pitrandrahana, ozinina fanodinam-bokotra, sns.) tsy manam-bola.
Ahoana no hividianana orinasa mpanamboatra $ 10M ka $ 50B tsy misy vola ambany.
Fomba hividianana teknolojia be pitsiny, fahaizana ara-teknika, fitantanana ary fahaizana marketing tsy misy vola.
Ahoana ny fomba hamatsiana ara-bola ny tetikasa indostrialy, fifanarahana, na fanafarana / fividianana tsy misy vola.
Ahoana ny fomba hividianana orinasa $ 10M ka $ 50B nefa tsy manam-bola.
Ahoana ny fampiasam-bola tsy misy vola midina: avadika famerenana tsy manam-petra ny $ 0.
Ahoana no hividianana fananana $ 10M ka $ 50B tsy misy vola ambany.
Ahoana no hividianana trano $ 10M ka $ 50B tsy misy vola ambany.
mampiasa vola tsy misy vola.
Ahoana ny fomba hahazoana na mividiana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B amin'ny orinasa antsinjarany nefa tsy manam-bola.
Ahoana ny fomba hahazoana na mividiana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B amin'ny orinasa teknolojia tsy manam-bola.
Ahoana no hividianana fananana $ 10M ka $ 50B amin'ny orinasam-pandraharahana ara-bola tsy misy vola ambany.
Ahoana no hividianana fananana $ 10M ka $ 50B amin'ny orinasa mpanamboatra nefa tsy manam-bola.
Ahoana no hividianana fananana $ 10M ka $ 50B amin'ny orinasam-panompoana matihanina nefa tsy manam-bola.
Ahoana ny fomba hividianana na hividianana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B amin'ny orinasa media tsy misy vola ambany.
Ahoana ny fomba hividianana na hividianana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B amin'ny orinasa vy tsy manam-bola.
Ahoana ny fomba hividianana na hividianana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B fananana amin'ny orinasan-trano tsy misy vola.
Ahoana ny fomba hahazoana na mividiana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B amin'ny trano fandraisam-bahiny tsy misy vola.
Ahoana ny fomba hividianana na hividianana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B fananana ao amin'ny orinasa fiaramanidina tsy manam-bola.
Ahoana ny fomba hahazoana na mividiana $ 10M ka hatramin'ny $ 50B fananana ao amin'ny orinasan-tsolika tsy misy vola.
108 countertrade tena manintona sy manonitra ny fahafaha-mitady vola any amin'ny firenena 100+.
Data hatreto amin'ny minisitra momba ny fanoherana sy fanodikodinam-bola amin'ny fahafaha-mitady vola avy amin'ny governemanta sy loharano hafa.
Ny fifanarahan'ny Governemanta misokatra, ny fampandrenesana momba ny fividianana entana, ny fanamarihana malemilemy, ny fahafaha-manao fifanarahana, ny asa aman-draharaha ary ny tetik'asa indostrialy mitaky fifandonana sy fanonerana. Ity dia angon-drakitra maharitra hatramin'ny minitra avy amin'ny loharanon'ny governemanta any amin'ny firenena 100+, anisan'izany i Etazonia.
Databata iraisampirenena momba ny fomba fanoherana sy fanonerana ny indostrian'ny Aerospace, Defense, ary High Technology.
Lisitry ny lahatahiry manerantany izay manome anao famatsiana bizina tsy miankina tsy misy farany izay antenaina hanaovana fifanarahana mifanohitra.
Compendium tokana an'ny torolàlana offset sy daty mifanohitra amin'ny fandresen-dahatra ny fifanarahana ataon'ny governemanta any amin'ny firenena 80, anisan'izany i Etazonia.
Tetikasa offset $ 100B tombony tsy misy vola.
Paikady fanoherana 300 tapitrisa dolara amin'ny fananganana orinasa tena mahomby.
Paikady fanoherana manokana 10 hampitomboana ny fidiram-bolanao amin'ny $ 100,000,000 farafahakeliny.
Paikady fitomboana 100X: Ahoana no ahombiazan'ny orinasa lehibe fitomboana 100X amin'ny alàlan'ny countertrade.
Masinina tetikady fanoherana: Ahoana ny fomba hahatonga ny fifaninanana tsy misy ifandraisany, hanjakazakan'ny tsena, hanovana ny orinasanao, hamoronana fitomboan'ny vola azo tombanana ary hahazoana harena amin'ny indostria tapitrisa dolara manaraka.
Ny Orinasa Boeing: ireo paikady mifanohitra fito nahatonga ny orinasa The Boeing ho orinasa aerospace lehibe indrindra manerantany ary mpanondrana mpamokatra lehibe indrindra any Amerika.
Paikady fanoherana 10 voaporofo tsy misy na fifaninanana fantatrao momba ny fampitomboana ny tombom-barotra ataon'ny orinasa 100X— nefa tsy ampitomboina ny vidinao, ny loharano ary ny risikao!
Ahoana no nahatanteraka ny fanamafisam-peo mahavariana $ 548 tapitrisa an'ny tilikambo birao misy rihana 53 ao New York City.
Vahaolana ara-bola rehetra: Ahoana ny fampiasana countertrade sy offset mba hamatsiana ara-bola ny fifanakalozana ara-barotra sy ny tetik'asa rehetra ampiasanao ny volan'ny olona, ​​ny trosa ary ny enti-manana. Tsy misy fiampangana zanabola. Tsy misy sarany indram-bola. Tsy misy fanamarinana bola. Tsy misy trosa. Tsy misy famerenam-bola.
Vahaolana fanarenana rehetra: Ahoana ny fampiasana countertrade hamerenana ny vola voasakana, ny tsy fanatanterahana ary ny fananana ketraka amin'ny sandan'ny boky feno.
Vahaolana fidirana amin'ny tsena rehetra: Mampiasa countertrade sy offset hahazoana fidirana amin'ny tsena vaovao na sarotra.
Vahaolana mihodina amin'ny rehetra: Ahoana ny fampiasana countertrade mba hialana amin'ny ara-dalàna ny vola voasakana, ny sazy ara-toekarena, ny vidiny ary ny fanaraha-maso ny fifanakalozana.
Vahaolana fitomboana ara-toekarena: Ahoana ny fampiasana countertrade hanarahana haingana ny fidiran'ny fampiasam-bola, ny teknolojia, ny fiaraha-miasa amin'ny indostria, ny famoronana asa be, ary ny fanitarana ny varotra sy ny fanondranana any amin'ny firenen-kafa.
mpanjifa sy fisarihana vola.
Fomba voaporofo hisarihana mpanjifa marobe hampiasa vola amin'ny fifanarahana mifanohitra aminao ao anatin'ny 6 ora amin'ny vidiny aotra ho anao. Ny fomba sy toerana haingana indrindra hahazoana mpanjifa ao anatin'ny 6 ora aorinan'ny fanombohana ny orinasanao.
Fomba iray voaporofo mba hikororohana ny vinavinanao amin'ny vera vaky ary hitalaho aminao hampiasa vola amin'ny fotoana mifanohitra aminao, nefa tsy miresaka na mihaona mifanatrika amin'ny olona rehetra ianao, nefa tsy manandratra ny rantsan-tànanao ary tsy mandao ny tranonao na ny birao misy anao akory.
AIZA ary FOMBA hahitana CASH mazoto amin'ny tanana CLIENTS… ary ny TOLOTRA TSY MAINTSY hapetraka eo alohan'izy ireo.
Fomba ahazoana karama ambony indrindra amin'ny fifampiraharahana mifanohitra aminao - Aiza no ahitanao mpanjifa sy mpiara-miombon'antoka amin'ny mpividy indray izay efa mitady anao. (Tsy ilaina ny mivarotra na maharesy lahatra.)
Ny fomba mora fantatra indrindra amin'ny "fivarotana mialoha" ny tenanao amin'ireo mety ho mpiara-miasa mifanohitra aminao… alohan'ny hiresahanao amin'izy ireo akory! (Miasa na dia «newbie» tanteraka aza ianao izao.)
Ahoana ny fomba hampandehanan'ireo mpampiasa vola ary mangataka aminao amin'ny fomba tsotra ny vola ho an'ny fifanarahana mifanohitra aminao ao anatin'ny 24 ora!
Ahoana ny fomba hananganana sehatra fidiram-bola mifanohitra. Torolàlana feno amin'ny fanombohana sy fananganana harena amin'ny countertrade.
Ny paikady tsara indrindra ahazoana orinasa Fortune 500 hanao fifanarahana fividianana vola mifanohitra aminao - na dia vaovao amin'ny orinasa aza ianao dia tsy misy mahalala hoe iza ianao, ary mbola tsy nihaona taminao mihitsy izy ireo. Na dia mipetraka ao anaty lava-bato tsy misy namana, fifandraisana na fifandraisana aza ianao.
Ahoana ny fampiasana doka Facebook handefasana ny asa mifanohitra aminao manerantany hanombohana mahazo dolara an-tapitrisany isam-bolana!
BLUEPRINT 24 pejy hananganana empira mpanohitra an'izao tontolo izao.
Ahoana ny fomba fampiasana orinasa mifanohitra mahomby nefa tsy manandratra ny rantsan-tànanao hanao na inona na inona ary tsy mandao ny tranonao na ny biraoo akory.
fifanarahana mifanohitra amin'ny fandresena.
Dingana tsikelikely handresena ny fifanarahana mifanohitra voalohany anio - ary manomboka mahazo vola alohan'ny sakafo hariva! Azonao atao ny mampiasa azy anio ary mahita ny valiny ao amin'ny kaontinao amin'ny banky rahampitso.
Rafitra iray isaky ny dingana hamoronana vola mitohy tsy misy farany ao anatin'ny 60 minitra na latsaka amin'ny alàlan'ny countertrade nefa tsy misy singa mahasosotra takian'ny orinasa hafa.
Fomba tsy dia fantatra loatra (naseho tamin'ny sarimihetsika maherifo malaza) amin'ny fametrahana ny sasany amin'ireo fifanarahana mifanohitra mahasoa indrindra azonao jerena.
Ahoana ny fakana orinasa fanombohana manomboka amin'ny aotra ka hatramin'ny an-tapitrisany… mampiasa countertrade irery.
Ireo dingana 3 mila 10 minitra isan'andro hanaovana (na amin'ny hariva na amin'ny maraina) dia hanome toky anao hanana vola miditra 7 isa avy amin'ny fifanarahana mifanohitra sy offset.
Torolàlana fanoherana ny fampiasana ny hevitry ny olon-kafa, ny fotoana, ny vola ary ny trosa.
Rindrankajy Countertrade 7 azonao ampiharina eo no ho eo na dia manomboka hatrany am-boalohany aza - tsipelina tsikelikely, tsipiriany isa-isa (ao anatin'izany ny ohatra, tolo-kevitra 'fomba' efa vita ho anao, modely amin'ny script, ary litera azonao ampiasaina).
Modely fifampiraharahana mifanohitra 10 mahasoa (izay azonao atao ny mivoaka sy mampihatra avy hatrany) hanafaka ny sainao sy ny fidiram-bola marobe.
Modely tsy misy fotony (fenoy-amin'ny-banga) hametrahana fifanarahana mifanohitra "tsy misy mpampidi-bola" izay mitondra $ 1M ka hatramin'ny $ 10M isam-bolana amin'ny fidiram-bola sisa tavela (azonao atao ny manao 3 na 4 amin'ireo karazana fifanarahana ireo isaky ny iray volana.)
Mahazo lisitra, kisary, tabilao, sary, ary ohatra feno ianao. Ireo rehetra ireo dia hanampy anao hanao "ezaka tsy mahomby" sy hahazo tombony be amin'ny ezaka ataonao.
MANDROSO CONTACT GOVERNMENT.
Torolàlana tsikelikely hahazoana fandresena iraisam-pirenena sy fifanarahana offset.
Ny paikady fito mifanohitra sy offset handresena ny fifanarahan'ny governemanta dia nahatonga ny The Boeing Company ho orinasa aerospace lehibe indrindra manerantany ary mpanondrana mpamokatra lehibe indrindra any Amerika..… Ary ny fomba "ampifanarahinao" amin'izay nataon'izy ireo handresena ny fifanarahana amin'ny governemanta any amin'ny firenena 80, anisan'izany i Etazonia.
Tantaran'ny tranga (ohatra tena izy) amin'ny fomba ireo orinasa nahomby indrindra teo amin'ny tantara countertrade sy offset nampiasaina mba hahazoana fifanarahana governemanta an-tapitrisany dolara ary mamorona harena tsy manam-petra mandritra ny androm-piainana—Ary azonao atao koa izao.
Database iray manerantany momba ny fifanarahana mifanohitra sy offset. Ny fampahalalana dia nangonina avy amin'ny fanadihadiana ny angon-drakitra nomen'ny SIPRI.
Lafin'ny fifanarahana sy ny etika ny fanao amin'ny fiaraha-miasa mifanohitra sy indostrialy.
Ny lalàna mifehy ny departemantan'ny varotra amerikana momba ny fifanarahana offset.
Fifanarahana mifanohitra amin'ny pejy 4 tena izy. Niampanga $ 25,000 ny mpisolovava handrafitra an'ity iray ity, saingy FREE ianao ao anatin'ity programa ity.
Ny lalàna mifehy ny 'countertrade and Offset' an'ny departemantan'ny varotra amerikana.
Ny andraikitry ny governemanta amerikana amin'ny fametrahana politika mifanohitra sy mifanohitra.
24 Offsets amin'ny tatitra momba ny varotra fiarovana.
Ny tombam-bidin'ny orinasa mpamokatra amerikana dia mitentina 15.5 miliara dolara.
Ny fanondranana entana amerikana dia nahatratra $ 1.67 trillion.
Ny indostria amerikana dia nanao fifanarahana varotra fanondranana fiarovana mifandraika amin'ny $ 14.6 miliara
Fanondranana entana 15 miady amin'ny fiarovana izay mitentina 18.4 miliara dolara.
Ny fifanakalozana offset ataon'ny orinasa amerikana dia mitentina $ 4.314 miliara.
Fifanarahana offset 64 an'ny orinasa amerikana miisa $ 1,179 miliara amin'ny firenena 203.599.
Fifanarahana offset an'ny orinasa amerikana 10 nosoniavina niaraka tamin'ny firenena 13 mitentina $ 14.622 miliara.
Ahoana ny fomba hitantanana ny fifanakalozana mifanohitra amin'ny fahafoanan-ketra. Ny toro-hevitra avy amin'ny IRS dia hampiseho aminao ny fomba marina sy mora hanarahana ny lalàna rehetra.
FOTOTRA TANANA COUNTERTRADE sy OFFSET.
A. Fampidirana ny fomba fanao fanoherana sy fanontana manerantany.
B. Karazan-tany COUNTERTRADE: Kaonty porofo, famindrana trano-miasa (BOT), famerenam-bola, famokarana, famatsiam-bola voasakana, fividianana Counter, Offsets (Offsets mivantana & Offsets tsy mivantana), Swap, Tolling, Switch Trading, Economic Fanatsarana, Indostrialy onitra, ary fiaraha-miasa amin'ny indostria.
C. 1. Ny vokatry ny offset. 2. Ny votoatin'ny offset. 3. Vahaolana offset. 4. Offset ao amin'ny EU. 5. Offset any Etazonia. 6. Offset any amin'ny firenena aziatika. 7. Offset any amin'ny firenena Afrikana. 8. Offset any amin'ny firenena Oseania. 9. Politika offset. 10. Fitantanana offset. 11. Paikady offset. 12. Fahombiazana offset. 13. Loza mitatao. 14. Tsy fahombiazana offset. 15. Fironana offset.
D. Ny andraikitry ny mpanohitra sy ny offset amin'ny varotra iraisam-pirenena tamin'ny taonjato faha-21.
E. Ny hoavin'ny indostrian'ny mpanohitra sy ny offset.
Antsipirian'ny PROGRAM CTO.
Daty sy ora fanomanana:
28 hatramin'ny 31 oktobra 2021. TIME: 4-7 PM EST.
Daty fanakatonana ny fisoratana anarana:
Mitombina mandra-pahatongan'ny famerenan'ny Timer etsy ambany!
Sarany CTO PROGRAM.
Ny fampiasam-bola amin'ny programa dia tsy handoa anao na inona na inona, raha tsy mandoa avy hatrany ny ramanavy mandritra ny fotoam-pitsarana 90 andro tsy misy risika anao. Tena matotra! Na hampitsoka ny sainao ity programa ity ary haneno lakolosy INCOME bebe kokoa noho izay noeritreretinao —- na tsy handany vola akory izany!
Mba hamaliana bebe kokoa ny fanontanianao dia azonao atao ny "mandramana" mandritra ny 90 andro tsy misy risika amin'ny fandoavana sarany fihenam-bidy anio.
100,000 $ fotsiny ny totalinao fampiasam-bola raha ianao misoratra anarana ho an'ity programa ity alohan'ny hitsangan'ny mpamaky isa eo ambanin'ny '0.0.0.0.0.'
IZAO TOLOTRA IZAO dia MBOLA HATRANY…
MANGATAKA PROGRAMA CTO
aotra ny risikao!
Fiantohana 100% VOLA-BACK!
Ny saram-pandaharanao dia 100% arovan'ny 90 andro, antoka miverina amin'ny vola!
Rehefa vita ny programa dia 90 andro no ampiasainao hampiasana ilay programa mba hahatratraranao ny tanjonao. Raha afaka 90 andro dia azonao atao ny mijery azy amin'ny masonay ary milaza aminay fa tsy nanao 100X, fara fahakeliny, ny volanao (10,000% ROI) na nahatratra ny tanjonao, dia haverinay amin'ny laoniny ny saram-pandraharanao.